ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 2008
ကျနော် ထင်ရင် လွဲခဲတယ်.
တကယ်ပါ.. ဗီယက်နမ်နိုင် မယ်လို့ ထင်တဲ့ အတိုင်း နိင်တယ်..ဗျ..
နိုင်တာမှ ထိုက်ထိုက်တန်တန်နိုင်တာ. ညစ်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ကစားတဲ့
အသင်း ရှုံးတာတောင်နည်းသေးတယ်။ လူချတယ် ။ မလေးဒိုင်ကလည်း
ဘက်လိုက်တယ် ။ စင်္ကပူက အိမ်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်။ ပွဲကြည့်ရတာ တကယ်ကို
ဖိုင်နယ်မှာ ထိုင်းနဲ့တွေ့မယ်။ ကြည့်ဖြစ်ဦးမလား မပြောတတ်ဘူး ။
DatE Monday, December 22, 2008 LaveL personal0comments link this
အာရှမှ အဆင့်မြင့် ဘောလုံးအသင်း
အရှေ့တောင် အာရှ ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ များကို တခုတ်တရ မကြည့်ဖြစ်သည် အတန်ကြာခဲ့ပြီ။ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယား ပွဲများအား စိတ်ဝင်စား ချိန်မှ စတင်ကာ အာရှပွဲ မည့်သည့်ပွဲကို မှ ကြည့်မရတော့။ ဘောလုံးရသ ပေးနိုင်မှု အလွန်နည်းသည် ဟုထင်သည်။ သုို့သော်လည်း ကျနော်သည် ဘောလုံးကို တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြည့်သူတော့ မဟုတ်ပေ။
မနေ့ညနေက စူဇူကီး ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် ဗီယက်နမ် နှင့် စင်္ကပူပွဲစဉ် အား အစဆုံးကြည့် လိုက်ရတော့ ဗီယက်နမ်အသင်းအား မချီးမွမ်းပဲ မနေနိုင်။ အရှုံးအနိုင် ရလဒ်သည် သရေဟု ဆိုသော်ငြား ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် ရသပေးစွမ်းနိုင်မှုက ဗီယက်နမ် အသင်းမှာ အပြည့်ရှိသည်။ လက် ဝှေ့ ပွဲများလို ဒိုင်ပွဲရပ် အနိုင်ပေး လို့သာ ရရင် ကျနော် ဗီယက်နမ်ကို ပထမပိုင်း ကတည်းက အနိုင်ပေးလိုက်မည်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံငယ် ဘောလုံး အသင်း တစ်သင်းတွင် ဒီလောက် ဘောလုံပညာရပ် အသင်းလိုက် အတွဲညီညီ ကစားနိုင်မှု ဒီလောက်ရှိလိမ့်မည် မထင်ခဲ့။ ဗီယက်နမ် ဘောလုံး အသင်းသည် ဥရောပ အဆင့်မှီ အသင်း တစ်သင်း ပင်ဖြစ်သည်။
ကစားပုံမှာ အာစင်နယ်မှ လူငယ်များ အမြန်ပေး ကာ အတက်အဆင်း ကစားသလို ဆင်တူသည်။ တကယ်တန်း သူတို့ကစားတာ နည်းမှန်သည်။ အာရှ ဘောလုံးသမား တစ်ယောက် အနေနှင့် ကွင်း ၂ ပတ် ၃ ပတ် လောက် ပြေးပြီးပါက အတော် ပင်မောနေပြီ။ နောက်ပြီ ခဏလေး ကစားရတာမဟုတ် မီနစ် ၉၀ တိတိ ကစားရတာ ဆိုတော့ တစ်ယောက်တည်း အပင်ပန်းခံ ကစားတာမျိုး လုံးဝမဖြစ်သင့်ဟု ထင်သည်။ ယခု ဗီယက်နမ်က အမြန်ပေးသည်၊ ခြေထောက်ထဲ ဘောလုံး ကြာကြာမထား အသင်းလိုက် ကောင်းသည်။ တစ်ဖက်လူ မကပ်ခင် ဘောလုံးကို ပေးတော့ ဘောပေးလွဲတာ အဖြစ်နည်းသည်။ တောင်ပံနှစ်ဖက် တိုက်စစ်အား အထူးကောင်းသည်။ နောက်တန်း အလယ်တန်း ရှေ့တန်း အားလုံး နားလည်မှုရှိပြီး အချိတ်ဆက်မိသည်။
ဂိုးမရ သော်လည်း လူတိုင်းပါးစပ်ဖြားမှာ ဗီယက်နမ် ကွလို့ တသသ ဖြစ်ရလောက်အောင်ကောင်းသည်။
စင်္ကပူဖက်မှ အထိုင်ကစားသည်. လူချသည်.. ဂိုးသမားတစ်ယောက်သာ အရပ်ရှည်သဖြင့် ကောင်းသည်။
အဟတ်... စိတ်ဓာတ်ရေးရာလည်း တခြားဆီဖြစ်သည်။ သရေရဖို့ မနည်းထိမ်း ကစားသွားသည်။
မြန်မာတွေ အတူယူသင့်တာတော့ ဗီယက်နမ်ရဲ့ ကစားနည်းကိုပါ။ အရပ်မောင်း လူလုံး အားဖြင့် မြန်မာ လောက်ရှိမည် မထင်. သို့ပေသော်လည်း ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကောင်းရသလဲ ဆိုတာ..........
နောက်ပွဲ ကို စင်္ကပူမြေတွင် ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲအခြေနေ မည်သို့ရှိမည် စောင့်ကြည့်ရဦးမည်။
DatE Thursday, December 18, 2008 LaveL personal0comments link this
ရေထုတ်ထားသော ဒေါက် (DocK)
အခုရက်ပိုင်း အလုပ်ပါးဆို ပြောကို မပြောခြင်ဘူး။ အထက် ဖေါ်ပြပါပုံ ကိုသာ ကြည့်ပါ။
အ၀င်နည်းလိုက်တဲ့သဘောင်္။ ဒါပေမယ့် လည်း ဒါပေမယ့်ပေါ့ဗျာ..ကမ္ဘာနဲ အ၀န်း ဖြစ်ပွား
နေတဲ့ ပြသဏာကို ခုတုန်းလုပ်ပြီး ပိုစ် တစ်ခု ဖြစ်အောင် ရေးလိုက်ပါတယ်။
စီးပွားရေး ရိုက်ခတ်မှု ကြောင့် သဘောင်္ကျင်းလည်း သဘောင်္ အ၀င်နည်းတယ်။
ကားဝက်ရှော့မျာ ကားအပြင် နည်းတော့ ၀က်ရှော့ အလုပ် သမားလေး တွေ ဘောက်စူး
နည်းတာပေါ့။ ခုလည်း ဒီလိုပဲ . ပြင်စရာ သဘောင်္မရှိတော့ အိုတီ လို့ ခေါ်တဲ့ ဟာကြီး
မရတော့ဘူးပေါ့။ များသောအားဖြင့် သဘောင်္ကျင်း အလုပ်သမားများ ဘ၀ကအိုတီ အပေါ်
မှီခိုနေရပါတယ်။ တစ်နေ့ အလုပ်ချိန် ၈ နာရီနဲ့ ကတော့ ဒီစင်္ကပူ၊ ဒီဈေး ဒီနှုန်း၊ ဒီအ ဆောင် စားရိတ်တွေနဲ့ အိမ်ပြန်လွှဲဖို နေနေ သာသာ ထမင်း နပ်မှန်အောင် ချွေတာ ချိုးခြံ နေရတယ်။
(မှတ်ချက် အိုတီသည် နှစ်ဆ ရ၏)။
အထိနာဆုံးက ကျနော်ပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အလုပ်လေးဗန်းပြပြီတော့ အိုတီယူ
ပြီး ဘလော့ရတာလေ။ ခုတော့ အဟင့်..အဟင့်... စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ဘလော့နိုင်တယ်..
DatE Sunday, December 07, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု
ရုံးကိုရောက်တာနဲ့ သိရတဲ့သတင်းက စိတ်မကောင်းစရာပဲ။
ဒီဇင်ဘာ လကုန်ပိုင်းမှာ ပါမစ်သက်တမ်း ပြည့်တော့မယ့် ကျနော့် company က
အတူနေ သူငယ်ချင်းများ အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ် မတိုးပေးတော့ဘူး ဆိုတာ
သိလိုက်ရတယ်. company က keppel ရဲ့ လက်အောက်က လေဘာဆပ်ပလိုင်း
နဲ့ သဘောင်္ပြင် တဲ့ company တစ်ခုပါ ။ တကယ်ကို ထင်မထားခဲ့ပါဘူး ၊ သဘောင်္ကျင်း
လုပ်ငန်းတွေ ကို ရိုက်ခတ်မယ် မထင်မိဘူး ။ လောလောဆယ် မြန်မာ ငါးယောက်။
နောက်ထပ် ဘယ်လိုတွေ လာမယ် မသိသေးဘူး ။ အရင်က ပါမစ်ပြည့်လို့ ပြန်မယ် ဆို
မပြန်နဲ့ လစာတိုးပေးမယ် ဆက်လုပ်ပါဦး၊ မင်းကို ဖိုမင်ရာထူးပေးဖို့ ရှိတယ် စဉ်းစားပါဦး
ဘာညာ နဲ ချော့ပြောတယ် ။ အခုတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ လတ်တလော စီးပွားရေး
ပြသနာ မှာ စင်္ကပူ က တော်တော် အထိနာတယ် ထင်တယ်..
အော်..... ကျနော်လား .. အင်း...ဟုတ်ကဲ့.. ဘလော့လို့ ကောင်းနေတုန်းပါ..:P...
DatE Thursday, November 27, 2008 LaveL ထူးခြားသတင်း0comments link this
ဒီမြင်ကွင်း ကို စိတ်ကူးနဲ့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေတာ ကြာပြီ ။
ဒီနေ့မှပဲ အမိအရ ရိုက်နိုင်တယ်။ ကမ်းကပ်ပြီး ပြင်တဲ့ သဘောင်္ကို
ခဏသွားရင်းနဲ့ အတော်ဖြစ်သွားတယ် ။ ရေးပြတာထက်စာရင်
ပုံတစ်ပုံကနေ တော်တော်ဖတ်လို့ ရမယ်ထင်ပါတယ် ။
DatE Tuesday, November 25, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
အ လုပ် ခွင် မြင် ကွင်း (၂)
DatE Monday, November 24, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
အ လုပ် ခွင် မြင် ကွင်း (၁)
ကျနော်ငယ်ငယ်က လက်ပန်းကျင်း ဆိုတဲ့ ရွာလေးက အလယ်တန်းကျောင်း
(ယခင်အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း၊ ယခု အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း)
မှာ ပညာသင် ကြားခဲ့ပါတယ် ။ (ကျနော်တို့ ဆရာ ဦးကြည်ဝင်း ပြောသလိုဆိုရင်
ပညာရည်နို့ သောက်စို့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ) အဲဒီရွာ လေးမှာ နန်းထိုက် ခေါ် နန်းကြီးကိုက်၊
မင်းညွန့် ခေါ် ဟံသာပု ၊ ဆန်းဝင်း ခေါ် ငနီ ဆိုပြီး သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ရှိတယ် ။
ဒီအမည်နာမ များကို ဆရာကြီး ဦးရွှေမန်း မှပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဆရာကြီးဦးရွှေမန်း
ကိုတော့ ဆရာဦးကြည်ဝင်းကပဲ လက်ပန်ကျင်းရွှေမြို့တော်ရဲ့ ပညာရေးဖခင် လို့
အမည်ပေးပါတယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာသင်ကြား
ရေးမှ အစိုးရအသိမှတ်ပြု လက်ပန်ကျင်း အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း အဖြစ်
ကျိုးစား တည်ထောင်သူ၊ နောက်ဆုံး အလယ်တန်း ခွဲဖက် ပွင့်တဲ့ အထိ ကျောင်း
အုပ်ကြီး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ဒီရွာလေးရဲ့ ပညာရေးကို ဖွံ့ဖြိုး စေခဲ့သူမို့ပါ။
ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း တစ်တွေလည်း မူလတန်း (ပုဆိုးလွယ်သိုင်း အရွယ်) မှစ
အဌမတန်း (လူပျိုပေါက် အရွယ်) အထိ လည်တွဲ ညီညီ အတူသွား အတူစား
(အစားဆက်တူ) နေလာခဲ့ကြတယ် ။ အခုတော့ သူတို့တွေက ရွာမှာ (တို့တစ်တွေက
တို့ရွာမှာနေ) ဆိုသလိုပေါ့။ အခြားသူငယ်ချင်းများဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံးပဲခွဲစက်နှင့်
အ၀ီစိတွင်းပိုင်ရှင် ဦးကျော်ငြိမ်း၏သား စိုးငြိမ်းအောင် ခေါ် ပိုးစိ ၊ ဦးဆန်းမောင်သမီး
ဥမ္မာချော၊ ဖုန်းဖုန်းမှာ ကျောက်ထုတ်ရှိတယ် ယုံပါကွယ် ဆိုတဲ့ သိချင်းနဲ့ ရွာဇာတ်
မှာ နာမည် ကြီးတဲ့ ဦးသန်းရှိန် သမီး ဖြူတင်၊ အခုတော့ ဆရာမ လုပ်နေတဲ့ မြင့်မြင့်ခိုင်၊
နေထက်လင်းကို အရမ်းကြိုက်တဲ့ တင်မြင့်ခိုင် ခေါ် ကြွက်မ ၊ ၇ တန်း ၈ တန်း ၉ တန်း
၁၀ တန်း နဲ့ ဘွဲ့ရသွားသော ယခု ကလေးကိုယ်စီ နှင့် သူငယ်ချင်းများကို
သတိရလိုက်တာ ။ အမှတ်တရ ငယ်ငယ်က မေ့မရနိုင်ပါ။
လက်ပန်ကျင်းဆိုတာ ရွာတန်းရှည် ရွာအမျိုးစားထဲမှာ ပါပါတယ် ။
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့ ကနေ ၁၂ မိုင် လောက်ဝေးတယ်လို့ ပြောကြတာပဲ ။
ရွာကနေ နောက်တွဲပါထွန်စက် (မြို့ပြတွင် အမှိုက်ကား) ကိုစီး ပြီး သွားရင်
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ကို ၄ နာရီလောက်မောင်းရတယ် ။ (ကားတာယာဖိနပ်
၂ ရံတော့မကုန်ပါ)။ ကျနော်တို့ရွာရဲ့ အရှေ့ ဖက်မှာ အေးမြကြည်လင်တဲ့
(ငယ်ငယ်က ငါးဖမ်းနေကြ) တောင်ကျ ချောင်းလေး ရှိတယ်။ အများသိတဲ့
မန္တလေးတိုင်း ကြက်မောက်တောင်ဆည်ကြီးမတည်ဆောက်ခင်က ဒီတောင်ကျ
ချောင်းဟာ ရေစီး အလွန်သန်တယ်လို့ အသက် ၈၀ ရှိ လူကြီး သူမ များက
ပြောပါတယ် ။ ၂၁ ရာစုထိ ဒီချောင်းကလေး ရှိနေပါတယ်။ ရွာရဲ့ အသက်သွေးကြော
ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး ။ ပြောဦးမယ်ဗျာ အခုန ဆရာ ဦးကြည်ဝင်း ကိုသတိရတာနဲ တစ်ဆက်တည်းဆရာ့အကြောင်း ပြောရဦးမယ် ။ ယခင်က ဆရာဟာ ရွာမှာ
တယ်လီဗီးရှင်း ခေါ် တီဗွီပြတယ်။ များမကြာခင် ခေတ္တ် ရေစီးကြောင်း အတိုင်းပေါ့
ဗွီဒီယို သို့ ပြောလဲပြသပါတယ်) ယခုအခါ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့
ကာ ၉တန်း၊ ၁၀တန်း ကျောင်းသားများ အား ဘော်ဒါ ဖွင့်ရ်ျ စာပြပါတယ်။
ဆရာက ရပ်ရေး ရွာရေး ဆိုလော်စပီကာ (ဓာတ်စက်) ကိုဖွင်ပြီး ဟန်ပါပါ ဟစ်ပါ
တယ်(ရပ်ရေးရွာရေးဆို မိုက်ခဲမယ်ဆိုတာ ဆရာပေါ့) အခုတောင် နားထဲမှာ
ဆရာ့အသံ ကြားရောင် နေပါတယ် “လက်ပန်ကျင်းရွှေမြို့ တော်မှာ နေထိုင်ကြ
ကုန်သော ရွာမိ ရွာဖ အပေါင်းတို့ ခင်မျာ့...” ဒီလို ဒီလို။ ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာ
နှစ်စဉ် မိဘဆရာ တွေ့ဆုံညှိနိုင်းပွဲနဲ့ တစ်နှစ်တာ ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲတွေမှာ
လည်း ဆရာက အစီစဉ် ကြေညာ သူပါ ။ ဒီလောက် ဝေးလံခေါင်းပါတဲ့ အရမ်မှာ
ဒီလို အစီစဉ်များကို ဆရာကဦးစီး ဦးရွက် ပြုခဲ့ကာ နှစ်စဉ်မပြတ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဆရာဟာ ရွာအတွက် ပေးဆပ်သွား တာတွေကို လူတော်တော်
များများ မသိကြပါဘူး ။ မြို့ပြ လေလှိုင်းဝေးတဲ့ ဒေသလေးက လေးတန်း ငါးတန်း
လောက်သာ ပညာသင်ခဲ့ရရှာ တဲ့ ကျနော်တို့ မိဘတွေရဲ့ ခေါင်းထဲကို ပညာရေး
ဆိုတဲ့ စကားလုံး အကြီးကြီးတွေ ပစ်ထည့်တာ ဆရာပါ ။ ကနော်တို့ကို
“ယနေလူငယ် နောင်ဝယ် လူကြီး ၊ အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်တာဝန် ပခုံးပြောင်း
ထမ်းဆောင်ရမယ့် နိုင်ငံသားကောင်းတွေ” လို့ တစ်ဖွဖွပြောခဲ့တာ ဆရာပါ။
စာသင်နေရင်းနဲ နိုင်ငံခြားကို ကိုယ်တိုင်သွားရ သလိုခံစားရအောင် ပြောပြတတ်
တာ ဆရာပါ ။ ဆရာဟူသည် စာကိုလည်းသင် လူကိုလည်းပြင် ဆိုတဲ့ ဆောင်
ုပုတ် နဲအညီ ကျောင်းစည်းကမ်း ရွာစည်းကမ်း ကောင်းအောင် ငါတို့ လွတ်လပ်ရေး
ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဘယ်လို မှာခဲ့တာ၊ နိုင်ငံကြီးသား တွေက ဘယ်လို
ဘာကြောင့် ဆိုပြီး ပြောပြနိုင်အောင် စာပေနဲ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံပါတယ်။
ရွာသားဆိုပြီး အားငယ်မနေရအောင် ပညာဆိုတာဘယ်လို လက်နက် ဖြစ်တယ်
ဆိုတာ တစ်ဖွဖွ ပြောပါတယ် ။ ၅ တန်းကနေ ၈ တန်းနှစ် အထိ ဆရာ လက်အောက်
မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တာ အရမ်း တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဆရာပြောတဲ့ လက်ပန်ကျင်း ရွှေမြို့
တော်ကြီး တိုးတက်ဖို့ တပည့် စဉ်းစားတတ်နေပါပြီဆရာ။ ဆရာကျန်းမာပါစေ ။
DatE Saturday, November 22, 2008 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
အခုမြင်ရတာ Dry Dock ဒေါက်ထဲက သဘောင်္ပါ ။ သဘာဝကန်းခြေ ကို အားပြုပြီး
တည် ဆောက်ထားတဲ့ Dry Dock ။ ပင်လယ်ဖက်ခြမ်းမှာ Dock Gate ခေါ်တဲ့
ရေတခါး ရှိတယ် ။ ရေတံခါးကိုဖွင့် ရေသွင်း ပြီးရင် သဘောင်္ကို Air winch နဲဆွဲတယ်
Boat လေးတွေနဲ တွန်းပြီး Guite line အတိုင်း ဒေါက်ထဲကို သွင်းပါတယ် ။ သဘောင်္
ဒေါက်ထဲေ၇ာက်တော့ရေတခါး ကိုပြန်ပိတ် ရေကို Pump နဲ ပြန်ဆုပ် ထုတ်ပါတယ် ။
အခုမြင်နေရတဲ့ သဘောင်္က Tanker အမျိုးစား၊ ဆီတင် တဲ့သဘောင်္ ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က
လုပ်တာဆိုတော့ အားလုံး အကောင်းတိုင်း ပဲရှိ သေးတယ်။ ရက်ကလည်း သိပ်မကြာဘူး
၁၅ ရက်လောက်ပဲ ။ ဒေါက်ထဲကို သဘောင်္ရောက်တာနဲ အလုပ်များပြီပဲ ။ Painting
Company က ဆေးအဟောင်းခွာ ဆေးသုတ်တယ် ။ Steel Repairing company က အဟောင်းများဖြတ်တောက် ကာ အသစ်ပြုပြင်။ Mechanery က စက်တွေ မော်တာ
တွေပြင်တယ် ။ သဘောင်္ကို မောင်းနှင်တဲ့ Engine တွေပြင်တယ် ။ ဆီ ထုတ်သွင်းတဲ့
Pump တွေ ။ သဘောင်္ကိုပင်လယ်ပြင်မှာLevel ချိန်ညှိတဲ့ ရေထုတ်သွင်း တဲ့ pump
တွေပြင်တယ် ။ Piping Company က Oil line, Gas line, Air line, Hydraulic line
တွေ ဖြုတ်တပ် ပြင်ဆင်တယ် ။ ပျားပန်းခတ်နေတဲ အလုပ် သမားတွေ Company
ပေါင်းစုံက အမြန်ဆုံးပြီးအောင် တွန်းအားပေး ပြီးလုပ်ခိုင်းကြတာပေါ့ ။ ဒီတော့ လည်း
အန္တရာယ်အရမ်း များတယ်။ ဒါပေမယ့် Safety ဆိုပြီး အနီဝတ်စုံနဲ အဖွဲ့ ရှိ တယ် ။
Work place safety အကြောင်း မနက်အလုပ်မစခင် မှာ ပြောတယ် ။ လိုက်နာ ရမယ့်
စည်းကမ်းချက်များ နဲ ဆုပေး ဒဏ်ပေး စနစ်ကိုလည်း သုံးပါတယ် ။ အလုပ်မှာ Personal
Protective Equipment ဆိုတဲ့ helmet, Safety glass/spec, Safety Boot/shore,
Body harness, Ear plug စုံနေတာပဲ အဲဒါတွေ ပြည့်စုံမှ အလုပ်လုပ်ရတယ် ။
သနားစရာကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည် က အလုပ်သမားများကျတော့ Grinding သမားလည်း
ဘာ အကာမှမပါဘူး ။ Welding သမားလဲ ဒီတိုင်း ဆော်တာပဲ ။
အော်... ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံစနစ် နဲ့တူတယ် ။
အလုပ်တော်တော်များများကို Air Pressure လေအားကိုသုံးတယ် ။
winch ၀န်ချီစက် တွေ၊ Crane ကရိန်းတွေ လည်ပတ်ရာမှာ လေအားကို သုံးတယ်။
Welding ၀ရိန် ကို ညီအောင် တိုက်စားရာမှာ သုံးတဲ့ Grnding mechane တွေလည်း
Air pressure ပဲ ။ သဘောင်္မှာ ဆေးအဟောင်းများ ၊ သံချေးခွာချ ရာမှာ လည်း
Air pressure ကိုပဲ သုံးတယ် ။
မိုးပေါ်ကို ထိုးထွက်နေတဲ့ ကရိန်းတွေ ၊ ကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် အများပြီးတင်နိုင်တဲ့
Hydraulic နဲမောင်နင်တဲ့ ကားကရိန်းများ စက်မှု အခြေခံ ပစ္စည်းတွေ ပေါများတော့
အလုပ်လုပ်ရတာအရမ်းကောင်းတယ် ။ မနိုင်မနင်းသယ်၇တာ တစ်ခုမှာ မရှိဘူး ။
များလိုက်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ ကလားတွေ ။ ဘင်္ဂလားတွေ ၊ ဖိလစ်ပိုင်တွေ ၊
တရုတ်တွေ ရိုက်သတ်လို့မကုန်ဘူး ။
တစ်ခါတစ်လေများ တွေးမိပါတယ် မြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင် ရှိရင်
ကျနော်တို့လို မြန်မာတွေ သူများနိုင်ငံထွက် အလုပ်လုပ် စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ ။
အဲဒီလို ကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်နှီးမြုတ်နှံမှု တွေ ရရှိဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာနဲ ဆက်နွယ်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ထူထောင်နိုင်ဖို့ တည်ငြိမ်တဲ့ နိုင်ငံရေး
ခိုင်မာ မှန်ကန်တဲ့ ဥပဒေ ၊ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ကောင်းပေါ်ပေါက်
ဖို့ မျော်လင့်မိပါတယ် ။
ဟား ဟား ...
ရေးရင်နဲ လမ်းလွဲသွားလို့ တော်ပြီ.......ရပ်လိုက်ပြီ ။
DatE Sunday, November 16, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
လက် ကျ ရာ ရေး လိုက် တယ်
gtalk မှာ စကားပြောတာ ကို လျှောချဖြစ်တယ် .
ဘလော့ကို ဖွင့်ကြည့်တဲ့ အရေ အတွက်လဲ လျှော့ကျသွားတယ် ။
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အတွေးတွေလည်း သိပ်မရှိတော့ဘူး ။
မယ်လိုဒီမောင်ရဲ ပိုစ်တစ်ခု ကလည်း အင်အားတွေ နဲ အမြင်ကို ရှင်းလင်းစေတယ် ။
အိမ် (ရွာ) ကို ဖုန်ခေါ်ဖြစ်သွားပြီ အမေနဲ စကားပြာဖြစ်တယ် ။
အမေ့အသံကြားရရုံနဲ အမေ့ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေ သလို ခံစားရတယ် ။ အေးမြတယ် ။
ညီငယ်ကိုလည်း လမ်းကြောင်းတစ်ခု ချပြနိုင်ခဲ့တယ် ။
လက်ရှိ ကုမ္မဏီက ကျနော့် အလုပ်တွေ တစ်ဝက်လောက် ပြီးသွားတယ်..
ဒီတော့ နည်းနည်း ခေါင်းအေးသွားတယ်.
ဒါနဲ ဘလော့လစ်ထဲက အပေါ်ဆုံးက ဘလော့ကို ဖတ်ကြည့်တယ်..
သတင်းတစ်ခု.. စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခု ကို ဖတ်မိတယ် ။
တွေးတွေးပြီး ရင်ထဲ နင့်ခနဲ နေသွားတယ် ။ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ လို့လည်း ခံစားရတယ် ။
မစ်(စ်) သွန်းသွန်း ဘလော့ကို ကြည့်တယ် ။ ဖတ်လို့မရဘူး ။
နောက်ပြီး တောင်ပေါ်သားလေး ဘလော့ကို သွားကြည့်တယ် ။ ဖတ်လို့မရဘူး ။
မခိုင်ဖြူဇော် ဘလော့ကို ဖွင့်ကြည်တယ် ။ ပိုစ်အသစ်တွေဖတ်လို့မရဘူး ။ ဘာလို့လည်း မသိ ။
မြန်မာ ၀ီကီကိုေ၇ာက်တယ် ။ မက်ထရိုပိုလိတန် ဘလော့ကိုရောက်တယ် ဗဟုသုတစုံတဲ့ ဘလော့တစ်ခုပဲ ။
အခု အလုပ်မှာ ၉ နာရီ အိုတီယူတယ် ၀ီကီ ကို နည်းနည်ပါးပါး ကြည့်တယ် ။စိတ်ထဲ တစ်ခုခု ဖြစ်တော့နေတယ် ။ ပြန်တော့မယ် ။
DatE Tuesday, November 11, 2008 LaveL personal0comments link this
ကျွန်တော် ဟောဒီ သဘောင်္ကျင်းကို ရောက်စကပေါ့ ..
လူတွေတော်တော်များတယ် အသားမဲ၊ အသားဖြူ၊ အသားလတ် တွေစုံလို့ တွေ့ရတယ် ။ အလုပ်ထဲကို အ၀င်အထွက် ချွေးနံ့နံ နေတဲလူအုပ်ကြားမှာ တန်းစီပြီး သွားရတာ တော်တော် စိတ်ပိန်တယ်။ အလုပ်စ ဆင်းခါစက သံချေးနံ့ တော်တော်နံတာပဲ။ သဘောင်္ တစ်စင်းလုံးကို သံနဲချည်း တည်ဆောက်ထားတာ၊ သစ်သားဆို အမည် ပါရုံလောက်သာရယ်။ လော့လာမှု မရှိခဲ့တော့ သိကိုသိဘူး၊
နောက်ပြီး သဘောင်္ အဟောင်းကို ပြင်တာ ဘော်ဒီ သံပြားတွေက ဆေးကို သုံးထပ် တစ်ချို့ဆို ငါးထပ် သုတ်ထားတာ။ ဒါကို ဂတ် စ် မီးနဲ ဖြတ်ကြတယ်. သံပြားကို အရည်ပျော်အောင် လုပ်ပြီးဖြတ်ရတာလေ အရင်က သုတ်ထားတဲ့ ဆေးအဟောင်းတွေက မီးအပူမှာ လောင်ကုန် တယ်။ ဘာပြောကောင်းမလဲ နံလိုက်တဲဖြစ်ခြင်းဗျာ.. ဆီချေးနံ့က နံ ညှော်စော်နံနဲ အသက် ဘယ်မှာ ရှူရမှန်းတောင်မသိဘူး ထူးပါဘူး နှာခေါင်းကို ကြာကြာပိတ် အသက်အောင့် ပြီး ဘယ်လောက်နေ နိုင်မှာမို့လဲ နံနံ စော်စော် ရှူရတာပဲပေါ့။ သိပ်မကြာပါဘူး တစ်လ လောက် လည်းရှိရော သံပြားပေါ်ထိုင်နေတာတောင် သံချေးနံ့ က မရတော့ဘူး၊ နေပူပူထဲမှာ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ကိုယ့်ချွေးနံ့ သူ့ချွေးနံ့ မသိတော့ပါဘူး။
ရောက်စက စိတ်ပိန်တယ်ဆိုတာ စကားပြောတဲ့နေရာမှာ လည်းပါ တယ်။ ကိုယ့်မိခင်စကားမဟုတ်ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စကားကို ထမင်းစား ရေသောက် ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ် ကိုယ်ပြောခြင်တာကို ကောင်းကောင်း ပြောနိုင်ပါတယ် ။ ဟောကြည့်-- သဘောကျင်းကို ရွေးချယ်မှု မှား ပြီးရောက်လာ.. ဘာတွေပြောမှန်း ကို သိဘူး. လူပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ .. အင်္ဂလိပ်စကား ပြောနေတာမှ ဟုတ်ရဲလား လို့ထင်၇တယ်။ သူတို့ဟာနဲ သူတို့ကျတော့ဟုတ်နေတာပဲ. ကိုယ်ဟန်ပြ စကားပြော နည်းကပါသေးတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဝေါ်ကီတော်ကီ နဲပြောကြတာ ဟားတော်တော် အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်.. ညှောင်တိညှောင်နဲ အသံကို ကျွန်တော်တော့ ဘာမှန်းမသိ တဲ့အပြင် ဟားတိုက် ရယ်မိတာပဲ။ အင်္ဂလိပ်စာက တစ်လုံး မလေးစကားက တစ်လုံး တရုတ်စကားကတစ်လုံး အိန္ဒိယ စကားက တစ်လုံး ပြောချလိုက်တာများ သူတို့ပြော တာပဲ အမှန် ။ ကိုယ့်ကို လာမေးသေးတယ် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်လားတဲ့.. နောက်မှ နားလည်မိတယ် အော် အမေဇုန်တောထဲရောက်နေတာကို..
အလုပ်ထဲရောက်စက မိုးပေါ်ကို ထိုးထိုးထောင်ထောင် နဲ အချွန်တက် တွေ အများသားပဲ .. ဘာတွေလည်းသိလား ကရိန်းတွေလေဗျာ.. မြန်မာပြည်နဲ ကွာတာ အဲဒါပေါ့.. ဟိုက်ဒြောလစ် ကို ပိုင်နိုင်တော့ စက်ပစ္စည်းက ပိုပြီး အကျိုးရှိရှိ အသုံးချလို့ရတာပေါ့။ ရောက်စမို့ ဟိုအပေါ်က တစ်ခုခုပြုတ် ကျလာမလား၊ ဟိုကရိန်းက သံပြားကြီးတွေကို သင်္ဘော ပေါ်တင်နေတာ မရောက်ခင် ပြုတ်ကျတော့ မလားနဲ ။ အသက်တောင် ၀အောင်မရှုရဲဘူး၊ မျက်တောင်လဲ မခတ်ရဲ ဘူးဗျာ.. ခေါင်းပေါ်းမှာ ၀ဲဝဲ - ၀ဲဝဲနဲ့။ အဲဒါ ဟိုမော့်ကြည့် ဒီမော့်ကြည့်နဲ ဇက် တောင်ညောင်းတယ်…အဲ အဲ.. အထက်ကိုချည်းမော့်ကြည့်နေလို့ လဲ ဖြစ်သေးဘူး လမ်းပေါ်မှာ ဖော့ကလစ် ကပိုက်တွေတင်လာတယ်.. အစွန်းကို မလွတ်ဘူးဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့ .. အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲဗျာ..
ရာသီဥတုက ပွင့်လင်းရာသီ ပါပဲ မိုးလည်းမရွာဘူး နှင်းလည်းမကျဘူး နေလည်းပူနေတာပဲ ဒါပေမယ့် ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံး ကြည့်စမ်းပါဦး အုံဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ မြူခိုးတွေဝေနေတာများလား။ မိုးရွခြင်လို့လား၊ သို့လော သို့လော မတွေး လိုက်ပါနဲ.. အဲဒါ သဘောကျင်းနေရာ တိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်တဲ သဘောပါ.. သံပြားအဟောင်းများဖြတ်ထုတ်ခြင်းမှလာသောမီးခိုးများ၊ ၀ရိန်ဆော် (welding) ရာမှ လာသောမီးခိုးများ နောက်တစ်ခုက ဂေါက်ချာတွေ (gauging) ထိုးရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော အခိုးအငွေ့များ စုံလို့ပါပဲ.. တကယ် တေ့ာ သဘောင်္ကျင်းဆိုတာ ပိုက်စံရှိရင် မနေသင့်တဲ မလာသင့်တဲ့ အရပ်ထဲမှာ ပါတယ်ဗျာ..
DatE Saturday, September 27, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
အပျင်းဖျားမှ အဖျားပြင်းပြီး တုပ်ကွေး ကွေးခြင်း
အခုရက်ပိုင်း ရာသီဥတုက ကျွန်တော့်ကိုနှိပ်ဆက်ပါသည်
အလုပ်များရတဲ အထဲမှာ ဖျားချင်သလိုလို မဖျားချင်သလိုလို ကိုယ့်ကိုယ်အားမရဘူးဖြစ်နေပါသည်
အပျင်းဖျား ရာမှ အခု အဖျားပြင်းလာသည်
စာရေးခြင်းနှင့် လိုက်လံဖတ်၇ှုခြင်းအား ခေတ္တ နားထားပါသည်
DatE Friday, September 26, 2008 LaveL personal0comments link this
ဘလော့ ဘလော့ (blog)
မနက်စောစောက.. ဘလော့လေးဖွင့်ကြည့်တော့.. လာလည်ကြသူတွေကို ကျေးဖူးတင် ကြောင်းပြောရင်း
မသက်ဇင် ဘလော့မှာ သူတင်ထားတဲ ပို့စ်တွေထဲက တစ်ခု ကို ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ်လည်း စိုးရိမ်စိတ်နဲ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်..
အကြောင်းအရာက C box (ဆီပုံး) ပြသနာ လေ.. ကိုယ်ကလည်း မကြာခင် ရက်ပိုင်း ကမှ C box (ဆီပုံး)
ကိုတင်ပြီးတာ.. ဟိုဖတ်ဒီဖတ် ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ ဆီပုံးတင်နည်း လမ်းစလေး တွေ့တယ် ၊ C box ဟာ ဘလော့ဂါ အသစ်တွေ အတွက် အရမ်း အကို အဆင်ပြေ ပါတယ်။ တကယ်ဗျာ..အစတုန်းက ဘလော့ကို ဘယ်သူလာလို့
လာမှန်း မသိဘူး။ C box လေး ထားလိုက်တော့ ဟော.. လာလည်တယ် ဘာညာ ဘာညာ ဆို ပြီး ပြောသွားကြ တယ်.. အကြံညဏ်တွေ ပေးသွားကြတယ်၊
ဘလော့ဂါချင်းချင်း နားလည်မှု တွေနဲ့ အားပေးမှုတွေ ရတော့.. တကယ် ဘလော့ရေးရတာ အားရှိတယ်.
ဒါပေမယ့် သူလိုပြသနာ ဖြစ်လာမှာ စိတ်ပူတာပဲ ။ ပြသနာကတော့ ဘယ်သူမှန်မသိ အမည်မဖေါ် အော်သွား တာ၊ ရိုင်းပြတဲ စကားတွေ ရေး သွားတာ တော်တော် ဆိုးပါတယ်.. ဒါထက်ဆိုးတာက ကိုယ့်နာမည် ကိုသုံးပြီး အခြား ဘလော့မှာ သွားအော်တာတို့.. နိုင်ငံရေးနဲ ငြီစွန်းတဲ့ စကားများ လိုက်လံ ပြောဆိုတာ တိုကျတော့ (လုံးဝ) မဖြစ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ.. ကိုယ့်ဘလော့မှာ ကိုကြိုက်တာရေးပေါ့၊ နည်းပညာကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ အကို၊ အမ များကျတော့ အိုင်ပီ တွေ ဘာတွေ နဲ့ ဖေါ်ထုတ်တတ်တယ် ဘယ်နိုင်ငံက. ဘယ်အိုင်ပီ ဘာလာရေးသွားတယ် ဘာတွေကို ကူးသွားတယ် ဆိုတာ သိနိုင်တယ်လေ။ ကိုယ်ကျတော့ ဒီလောက် သိဘူလေ၊ တကယ်ပါ.. ကိုယ်ကိုတိုင် စိတ်ကူးလို့တောင် မကြည့် ဖူးတဲ့ အဖျက်လုပ်ရပ်တွေ ရှိနေတယ်.. ဒါ ဘလော့ဂါအသစ်တွေ အတွက် သင်ခန်းစာတွေပါပဲ.. ပထမတုန်းက ဘလော့လောက ဒီလောက်ကျယ်မှန်း လုံးဝမသိခဲ့ဘူး၊ ဒီလိုရုန်းကန် ရမှန်းလည်း မသိဘူး.. ခုတော့ အခက်ခဲတွေနဲဘလော့ဂါဘ၀ကို နည်းနည်း သဘောပေါက် လာတယ်။
DatE Saturday, September 20, 2008 LaveL personal0comments link this
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ သုံးလုံးနဲနေရာပေါ့..
သူလျှော့ပါ ငါလျှော့နဲပါ နဲ
ဘေးကနေ လေနဲ့ပင့်သူတွေလဲ အများကြီးပေါ့..
တစ်နေ့ အမြင်မှန် ရကြမှာပါ..
ကိုယ်က အငယ်လေ ဘာမှပြောခွင့် ရှိဘူး..
တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ ခြေရာတွေတွေရတယ်..
တွေးတွေးပြီး ရင်ထဲ တကယ် မကောင်းဘူး ..
DatE Wednesday, September 17, 2008 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
နှိုးစက်သံက..“မလွမ်းရဲသေးဘူမောင်ရယ်” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲအတူ အိပ်ယာထပါတယ်။ အတူနေတွေထဲမှာ တစ်ယောက်ရှိတယ် နှိုးစက်သံကို အဆိုဝါးဆုံး ပေးထားတယ် ပြီးတစ်ခါမှ ပထမ နှိုးစက်သံ နဲ့ မထဘူ.. နောက်ဆုံးမှအိပ်ယာထတတ်ပါတယ်.. တော်တော်ချင်ဖို့ ကောင်းတယ်။ တန်းစီပြီး-မျက်နှာသစ်..သွားတိုက်…ရေအိပ်ဝင်..ရေချိုး..ဘာညာပေါ့။ ပြီးတာနဲ..အလုပ်ဝတ်စုံဝတ်လိုက်တယ်.. အလုပ်သွားရင် မပါမနေရ..ပါမစ်ရယ်..သဘောင်္ပေါ်
တက်တဲ့ ကဒ်. စုံအောင်ထည့်လိုက်တယ်..ပြီးတော့..နေ့ခင်းစာထမင်းဟင်းကိုဗူးထဲထည့် (မှတ်ချက်..ညထဲကအဆင်သင့် ချက်ပြုတ်ထားလျှင်) နှေးနေလို့မရဘူ.. ထမင်းဗူးယူပြီး..
ဖယ်ရီရှိရာကို အမြန်ပြေးရတယ်..နောက်ကျတဲခြေထောက်..ကတော့..ကိုယ့်ဘာသာ.တက္ကစီ ကိုငှားသွားရတယ်..ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့..ပြန်အိပ်တော့..ဖယ်ရီကားဟာ..၆နာရီအတိမှာ ထွက်ပါတယ်..(သိုပေမယ့် - ရံဖန်ရံခါ အပြောင်းလဲရှိသည်)။ နံနက်စောစော ပျားပန်းခတ်နေ တဲ့လူတွေ ကြားမှာ ကိုယ့်ဖယ်ရီကိုရွေးရင်း နဲ့ အလုပ်ရှိရာ (KEPPEL SHIP YARD)ကို ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာ.. အလုပ်ထဲကိုမ၀င်ခင်..ခေတ္တမျှတန်းစီရ်ျ စောင့်ဆိုင်းပြီး.. ဂိတ်စောင့်များမှ ၀င်ရန်အချက်ပေးမှ ၀င်ရပါတယ်.. တန်းမစီပဲ ကျော်တက်ရင် စင်္ကပူငွေ ၅၀လခမှဖြတ်ပါတယ်. ဒီတော့ စည်းကမ်းကောင်းတာပေါ့..
(ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားပဲ တကယ်ဖြတ်တာ).
Keppel ship yard က တော်တော်ကြီးပါတယ်.တစ်ပြိုင်တည်း သဘောင်္ ၁၀ ဆီးလောက် ပြင်နိုင်တယ်.. အင်း..အဲဒီမှာ..company တွေကလည်းအများကြီး ပေါ့. Keppel main company က section အမျိုးမျိုးနဲ့..လုပ်ကြတယ်..ကျန်တဲ့..sub-contractor ခေါ်တဲ့..labours supply company တွေကလည်းအများကြီးပေါ့။ လစာနည်းတာ..အလုပ်သမားကို ဖိခိုင်းတာ.. လစာကဖြတ်တာ တောက်တာ များတာ အဲဒီ sub-contractor တွေပေါ့. လူညွန့်ခူးစားတာ။ ဘောနပ်စ် ဆိုတာဘာကြီးလဲလို့မေးယူရမှာပါ။
(ခံစားမှု=ရတဲ့လခနဲ့ လုပ်ပေးရတာနဲ့ လုံးဝမတန်ပါကြောင်း)။
yard ထဲကိုရောက်တော့..cantee ရှိတယ်..အိန္ဒိယအစားအစာ၊ မလေးအစားအစာ၊ တရုတ် အစားအစာ တွေရပါတယ်. စင်္ကပူမှာတော့ ဈေးချိုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်..ကော်ဖီ နဲ ပေါင်မုန့် လဲရတယ်.. ဆိုင်မှာမ၀ယ်ချင်ရင်..auto machine မှာအကြွေထည့်ပြီးဝယ်လို့ရ ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ပိုပြီးပြန်အမ်းတတ်ပါတယ် (ဒီဂွင်ကိုစောင့်နေတာ)။
ပြောရဦးမယ် yard ထဲမှာ..မိန်းကလေး..တော်တော်ရှားပါတယ်.. office staff မိန်းကလေးများ သာရှိပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ အင်ဂျင်နီယာမိန်းကလေး .. အလုပ်ထဲလာပြီး.. ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း မှ အပ မတွေ့ရပါ.. လာတဲမိန်းကလေးလည်း ခေါ်တောတစ်ထောင်မက နိုင်ငံပေါင်းစုံ မျက်လုံး တွေနဲ တွေ့မှာပဲ။ ပြောရင်းနဲ..ခေါင်းစဉ် လွဲသွားတယ်.. (စောရီး)
မနက်စာ အေးအေးလူလူ စာပြီး..နာရီဝက်လောက် နားလို့ရသေးတယ်.. ကားအခက်ခဲ ကြောင့် စောပြီထွက်တာကို.. ၇း၁၅ နာရီမှာ အလုပ်စဖို့ လူစုပါတယ်..မလေးလူမျိုး ဖိုမင်ချုပ်မှ အလုပ်တွင် ပါးရေနပ်ရေ ရှိဖို့လိုကြောင်း..သူများမသိအောင် ယူတတ်ဖိုလိုကြောင်း..
အန္တရယ်များကြောင်း၊ company မှ ပစ္စည်းများ (ဖျက်ဆီး သို ပျက်ဆီး) တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လျှင်.. လစာမှ ငွေဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြသနာ တက်လျှင် ကိုယ့်ကိက္စ ကိုယ်ရှင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း. အလွတ်တည်ကန်ဘောများကန်သွင်း ပြီး အလုပ်အားစတင်ဖို့ လက်ကိုဝှေ့ရမ်းပြီးပြောပါတယ်.
အားလုံးကလည်း ရိုးအီနေသော နေစဉ်ဘ၀ကို..စိတ်ဓာတ်ကျစွာဖြင့် ဖြတ်သန်း စတင်ကြပါတယ်..
DatE Saturday, September 06, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
ဟိုဖက် ကမ်းက သဘောင်္ကျင်း
အဝေကို မျှော်ငေးရင်း.. ရင်ထဲမှာတော့.. ဟာတာတာနဲ့ လွမ်းနေတယ်
ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့် ဒီမြင်ကွင်းတွေချည်းပဲ။ မိုးပေါ်ကို ထိုးထွက်နေတဲ့
ချွန်တက်တက် အရာတွေ .. မှိုင်းပြပြ တိပ်ဆိုင်တွေ နဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကို
ဖြတ်ပြီး တိုက်ခတ်လာတဲ့လေ ပင်လယ်နံ့ကို ရူရှိက်ရင်း . မြင်နေကြ မြင်
ကွင်းကလည်း ရိုးအီနေပြီ ။
DatE Tuesday, July 01, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this